"प्यूठान" बस्ती रित्याउने भया’नक त्यो दुर्घटना - Himalayan Dristi
४ मंसिर २०७६, बुधबार १३:०३ मा प्रकाशित
SHARES | 59
मङ्सिर ४, प्यूठान । अनुहार मलिन छ । हरपल रसाएझैं देखिन्छन् आँखा । ६१ वर्षीया दीपा अधिकारी रिजाललाई १४ वर्षअघिको दुःखान्तले आज पनि झस्काइरहन्छ । उनी चाहन्छिन्, त्यो घटना दिमागबाट मेटिएर जाओस् । तर अहँ, त्यो त आज पनि उत्तिकै ताजा छ ! उत्तिकै पीडादायी ।
यो खबर गिरुप्रसाद भण्डारीले आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन् । ०६१ माघ ८ गते शुक्रबार दाङको देउखुरीबाट बेहुली लिएर प्यूठानको टारीगाउँ फर्केको जन्तीबस गर्जेनीमा दुर्घटनामा परेको थियो । त्यो भयानक दुर्घटनामा परिवारका सबै सदस्य गुमाएकी थिइन्, बुहारी भित्र्याउने प्रतीक्षामा रहेकी बेहुलाकी आमा दीपाले । बुहारी ल्याउन आफूले अन्माएर पठाएको जेठो छोरो लोकराजसहित पति भीमकान्त, कान्छो छोरो माधव, देवर, भान्जा, भतिजालगायत ४१ आफन्तलाई त्यो दुर्घटनाले उनीबाट हठात खोसेको थियो ।
घोराही सरेपछि दीपा टारी फर्केकी छैनन् । तर उनको मन टारीबाट अलग्गिएको पनि छैन । ‘यता आएपछि त्यो जमिन, घर, बाहिरी सेरोफेरो त छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर, मनभरि सधैँ टारीगाउँ र आफन्तकै मात्र झल्को आइरहन्छ ।’
सपनामा टारीगाउँको सेरोफेरो र आफन्त देख्दा रमाउने उनी झल्यास्स बिउँझिँदा अर्कै संसारमा आइपुगेजस्तो लाग्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘ब्युँझँदा मसँग आफन्त र टारीगाउँ केही हँॅदैन । दिनभरि कुनामा बसेर एक्लै रुन्छु । कोसँग पीडा सुनाउनु ? सुनाए पनि अब गुमेका कोही फिर्ता हुने होइनन् ।’
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएर लामो उपचारपछि बाँचेका प्यूठान नगरपालिका, गेजबाङका शिवराज पण्डितले दुर्घटनापछिको जीवनलाई भगवान्को उपहारका रूपमा लिएको बताए । पण्डितको दाहिने खुट्टा, देब्रे हात र बायाँपट्टिका सातवटा करङ भाँचिएका थिए ।
‘दुर्घटना सम्झँदा त्यतिका लासको थुप्रोमा कसरी जीवितै रहिएछ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘एकअर्कालाई हेर्दाहेर्दै गुमेका आफन्तको सम्झना आउँछ । बरर आँसु झर्छन् ।’ दुर्घटनामा घाइते भएकाहरू सबै अहिलेसम्म जीवितै रहेको पण्डितले बताए । तीमध्ये पाँच जना गाडी खस्दै गर्दा हामफालेर बाँचेका थिए भने आठ जना बससँगै खोलामा झरेका थिए ।
सालोको बिहे भएकाले निकै रमाइलो गर्दै जन्ती गएको पण्डितले सुनाए । उनका अनुसार फर्कंदा चालकले गाडी धेरै छिटो कुदाइरहेका थिए । गीत घन्किरहेको थियो । कोही नाच्दै थिए, कोही गाउँदै । बाहिर सिमसिम पानी परेको थियो । ‘अन्दाजी साँझ सवा ६ बजेको हुँदो हो । गर्जेनीको घुम्तीनेर आइपुगेपछि गाडीमा एक्कासि गड्याङ्ग आवाज आएको थियो ।
त्यसपछि गाडी पल्टिँदै सीधै खोलामा पुगेको सम्झन्छु,’ उनले भने, ‘अरू कुरा त अस्पतालमै पुगेपछि मात्र थाहा पाएँ ।’ त्यो सडक अझै फराकिलो पारिएको छैन । अझै पनि त्यो बाटो भएर यात्रा गर्दा डर लाग्ने गरेको उनले सुनाए । ‘त्यसबेला ग्राभेल थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि उस्तै साँघुरो छ । कालोपत्रे मात्रै गरिएको छ ।’
गर्जेनी दुर्घटनाले सिंगो मुलुकको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शोक वक्तव्य निकालेका थिए । जिल्ला विकास समिति, प्यूठानमा भएको सर्वदलीय बैठकले अधिवक्ता रामेश्वर सुवेदीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय स्वतन्त्र नागरिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
‘हामीले धेरै दुःख गरेर दुर्घटनाको कारणसहित प्रतिवेदन तयार पारेका थियौं,’ सुवेदीले भने, ‘तर कतैबाट पनि सुझाव कार्यान्वयन भएन । गर्जेनी दुर्घटना भएको १५ वर्ष बित्यो तर अहिले पनि सडक यातायातमा उस्तै लापरबाहीको अवस्था देख्छु ।’ चालकको गाडी चलाउने अनुभव कम भएको, तीव्र गतिमा बस चलाएको, मदिरा सेवन गरेको, साँघुरो सडकका कारण दुर्घटना भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको उनले बताए ।